सरकारले जवरजस्ती संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाए नैतिकता प्रयोग गरिन्छ –दिलनाथ गिरी
२०७३ फाल्गुण १७ मंगलबार, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले यथास्थितिमा सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउने हो भने नैतिकताको प्रयोग गर्ने जनाएको छ । यथास्थितिमा सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधनमा आफूहरुको सहमति नभएको भन्दै सत्ता साझेदार राप्रपाले परिस्थिति अनुकुल नभए सरकार छाडेर विपक्षमा मतदान गर्ने जनाएको हो । राप्रपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले हाम्राकुरासंगको कुराकानीमा मधेसी मोर्चालाई खुशी पार्न संविधान संशो ... बाँकी अंश»
मुलुकलाई दुर्घटनाबाट बचाउन संविधान संशोधन गरी चुनावमा जानुपर्छ – योगेन्द्र चौधरी
२०७३ फाल्गुण १६ सोमबार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संशोधनको विषय अगाडि बढ्नेमा शंका भइरहेका बेलामा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले संविधान संशोधन नै अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताको एकमात्र विकल्प भएको बताएको छ । फोरम लोकतान्त्रिक संसदीय दलका प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीले हाम्राकुरासंगको विशेष कुराकानीमा संविधान संशोधनमार्फत निकास खोज्न शीर्ष दलहरुलाई आग्रहसमेत गरेका छन् । उनले संविधान संशोधन गरेरमात्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिन ... बाँकी अंश»
वर्ड इकोनोमिक फोरमले आत्मनिर्भरलाई देखाएको सफलताका तीन सूत्र
२०७३ फाल्गुण १५ आइतबार, काठमाडौं । अरुको अधीनमा बसेर काम गर्ने मन कसको पो हुन्छ र ? तर, अरुको अधीनमा बसेर काम गर्ने चाहाना छैन भन्दैमा झट्ट आत्मनिर्भर बन्नेबाटो तर्फ लाग्न पनि सहज छैन । किनकी आत्मनिर्भरताको बाटो आफैंमा जोखिमपूर्ण बाटो हो । अझ यसको सुरुवाती समयत झनै जोखिमपूर्र्ण हुन्छ । ‘सपना लिनूस् र त्यो सपना पूरा हुन्छ’ त धेरै दार्शनिक पुस्तकहरुले दिने दर्शन हुन् । सपना देखेपछि पूरा हुन्छ भन्ने दर्शन पनि धेरैले दिने गर्दछन् । तर, सफलता प्राप्त कसरी हुन्छ भन्ने व ... बाँकी अंश»
२०७३ फाल्गुण १३ शुक्रबार, काठमाडौं । नेपाल मजदूर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेले नेपाली राजनीति विचारविहीन हुँदै गएको बताएका छन् । हाम्राकुरासंगको विशेष कुराकानीमा नेता विजुक्छेले अहिले संसदमा पेश भएको थ्रेसहोल्डको विषय राजनीतिलाई विचारविहीन बनाउने षडयन्त्रबाट नजिक रहेको बताए । उनले दलहरु वैचारिक भावनाले चल्नुपर्नेमा बल, पैसा र शक्तिबाट केन्द्रीत हुँदै गएको स्पष्ट पारे । थ्रेसहोल्ड राखिंदा विचारको राजनीति सकिने उनको दाबी छ । आफूहरुले थ् ... बाँकी अंश»
महाशिवरात्रि: पशुपतिमा मस्त बाबाहरु..... (फोटोफिचर)
२०७३ फाल्गुण १२ बिहिबार, काठमाडौं। महाशिवरात्रि पर्व नजिकिएसंगै आराध्यदेव पशुपतिनाथमा चहलपहल सुरु भएको छ। हिन्दुहरुको महान् पर्व महाशिवरात्रिमा देश विदेशबाट साधु सन्तहरु काठमाडौं भित्रिएका छन्। पशुपति परिसरमा जोगीहरु मस्त देखिएका छन्। गाँजा, भाँगको नशामा लठ्ठ रहने बाबाहरु अनेक चर्तिकला गरिरहेका भेटिएका छन्। शरीरमा खरानी धसेर धूनी तापेर बसिरहने बाबाहरु आध्यात्मदेखि विज्ञानसम्मका कुरा गरिरहेका भेटिएका थिए। कोही भने नशामा रम्न नै बाबाको भेषमा रहेको जस्तो द ... बाँकी अंश»
२०७३ फाल्गुण १२ बिहिबार, काठमाडौं । नेपालीमा एउटा उखान छ ‘पशुपतिको यात्रा सिद्राको व्यापार’ । अहिले पाशुपत क्षेत्रमा जाने हो भने यो उखान पूर्णरूपले चरितार्थ हुन्छ । नहोस् पनि कसरी पाशुपत क्षेत्रलाई व्यापारको थलो बनाउने नागाबाबाहरूका साथै जोगी र साधुहरूको हर्कतले त्यसलाई थप स्पष्ट पारेको छ । यिनीहरू नै पशुपतिनाथको मर्ममाथि प्रहार गर्ने व्यापारी बनेका छन् । भगवान शिवजी विष, भाङ र धतुरोमा लठ्ठ हुन्छन् भनी गलत प्रचार गर्दै युवाहरूलाई बिगार्न यी जोगीहरू खुलेआम भाङ, ... बाँकी अंश»
२०७३ फाल्गुण ७ शनिबार, काठमाडौं । जनतापालन राष्ट्रप्रमुखको प्रमुख कर्तव्य हो । संसारमा चलेको धर्म व्यवस्थाको मूल कारण नै राष्ट्रप्रमुख हो । राष्ट्रप्रमुख तथा शासक कामबाट उत्पन्न हुने शासकका दस र क्रोधबाट उत्पन्न हुने आठ दोषहरूबाट बच्नुपर्छ । राष्ट्रप्रमुखको भयको कारणले गर्दा कसैले कसैको सम्पत्ति एवम स्वतन्धत्रतामा हडप गर्न सक्दैन । ईश्वरले सम्पूर्ण प्राणीहरूको रक्षक जगत्को धर्मरूप ब्रह्माको तेजपुञ्जबाट निर्मित पान्च भौतिक शरीर स्वरूपको रूपमा राष्ट्रप्रमुखल ... बाँकी अंश»
२०७३ फाल्गुण ७ शनिबार, काठमाडौं । केहीदिन अघि एक सरकारी लगानीबाट सञ्चालित एक समाचार संस्थाले विराटनगरका एक परिवारको सफलताको कथा प्रकाशित गर्यो । जाँगर लुकाएर मुलुक र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई अनेक आक्षेप लगाउँदै विदेशिनेहरुको भीडमा उनीहरु एकजना नमुना व्यक्ति थिए, जसले धेरैका लागि एउटा खुल्ला चुनौती दिन सक्छ कि नेपाल सबैले भनेजस्तै सम्भावनाहीन मुलुक होईन भनेर । पक्कैपनि यस्ता सफलताको कथा सरकारी सञ्चारसंस्थामा प्रकाशित भएको यो पहिलो भने होईन । कम्तिमा पनि साताको ... बाँकी अंश»
२०७३ फाल्गुण ५ बिहिबार, हेटौंडा। विभिन्न पाँच बुँदे माग राख्दै स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुले गरेको आन्दालनको कारण देशैभरीका स्थानीय निकायहरु ठप्प रहेको छ । जोकोही स्थानीयले पनि दैनिक सेवा लिन जानुपर्ने गाविस, जिविस र नगरपालिकाहरु कर्मचारीहरुको आन्दोलनका कारण ठप्पहुँदा सयौं सेवाग्राहीहरु दैनिक स्थानीय निकायको कार्यालयबाट निराश मुद्रामा घर फर्किने गरेका छन् । पाँच दिनदेखि जारी सो आन्दोलन पछिल्ला दिनहरुमा झनै यति कडा बन्दै गएको छ कि आन्दोलनको विषयमा समाचार स ... बाँकी अंश»
२०७३ फाल्गुण ३ मंगलबार, डोटी । २०६५ सालमा डोटीको गगुडा गाविसका टेकबहादुर चन्द रेडियोका नियमित स्रोता हुन् । अहिले जस्तो जहाँतही एफएम रेडियो थिएनन् त्यतिबेला । रेडियो नेपालका कार्यक्रम नछुटाई सुन्थे चन्द । सस्यान ठुली जिमालीकी सुजना शाही पनि रेडियो नेपालकै नियमित स्रोता । चन्द र शाही दुवै रेडियोका स्रोता त थिए नै तर, दुवैको रोजाइको कार्यक्रम थियो ‘परदेशीको सन्देश’ । रेडियो नेपालबाट प्रत्येक आईतबार प्रशारण हुने कार्यक्रम विदेशमा बस्नेहरु लागि लक्षित गरी उत्पादन ... बाँकी अंश»
२०७३ फाल्गुण २ सोमबार, विनय देशार । बुझेर वा नबुझेर । घटना घट्छन् । एउटा घटनाले नै अर्को घट्ना जन्माउन सक्छ ! घटना शब्दको धेरै व्याख्या नगर्ने हो भने, सामान्यतः घटना भन्ने वित्तिकै मान्छेले अप्रिय वा विपद् भन्ने नै बुझ्द छ । घटनाक्रम सकारात्मक क्षण पनि हो भन्ने चैं विर्सनु हुँदैन । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो समय अप्रिय घटनाक्रम अलिक बढी सार्वजनिक भएका छन् । अब विषय प्रवेश गरौँ । ‘प्रेम’ र प्रेम दिवस अर्थात् ‘प्रणय दिवस’ । अंग्रेजी भाषामा भन्दा ‘भ् ... बाँकी अंश»
२०७३ फाल्गुण २ सोमबार, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी फाल्गुन १४ गते लामो समयदेखि हुन नसकेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)को निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ । पटकपटक सर्दै आएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावको लागि आवश्यक प्रक्रिया समेत आईतबारबाट सुरु भईसकेकोले यस पटक भने स्ववियु निर्वाचन हुने निश्चितप्रायः देखिन्छ । यस अघि पटकपटक निर्वाचनको बाधक बनेको उमेरको हदबन्दीको समस्या समेत समाधान भईसकेकोमा अब भने निर्वाचन रोकिने आधार खासै देख ... बाँकी अंश»
२०७३ फाल्गुण १ आइतबार, मलेखु । महादेवस्थान गाविस–२ सिमथलीका चन्द्रबहादुर चेपाङको घर भत्कियो । उनले भूकम्पले भत्केको घर प्राविधिकलाई देखाए । प्राविधिकले उनको घर भत्केको भनेर लेखेनछ । गाउँमा अरुले राहत पाउँदा उनले पाएनन् । घर बनाउन नसक्ने भएकाले उनको परिवार अहिले परालले छाएको सामान्य टहरामा रात बिताइरहेको छ । उनले गाविसमा गएर गुनासो टिपाए तर अझै पनि सहयोग पाउन नसकेकाले दुई वर्षदेखि सो छाप्रो उनीहरुको बास बस्ने ठाउँ भएको छ । एक संस्था भूकम्पपछि श ... बाँकी अंश»
२०७३ माघ २४ सोमबार, काठमाडौं । झट्ट सुन्दा अचम्म पनि लाग्न सक्छ नेपाल पछिल्लो समय भारतीय प्रभावबाट हटेर चीनसँग सम्बन्ध सुधार्न थलिसकेको छ । यो कुनै चियाँ गफ र नशाको तालमा भनिएको कुरा नभएर एशिया प्रशान्त क्षेत्रका विविध घटनाहरुको विश्लेषणत्मक समाचार प्रस्तुत गर्ने जापानी अनलाईन द डिप्लोम्याटले गरेको विश्लेषण हो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमनसँगै बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई भारतीय योजना बमोजिम बनेको र भारतीय शासकहरुको डिजाईनमा बनाईएको ... बाँकी अंश»
२०७३ माघ २२ शनिबार, काठमाडौँ । २० जनवरी २०१७ का दिन पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एकपछि अर्को गरी धमाधम सुरु गरेको निर्णयसँगसँगै विश्व राजनीतमा नयाँ तरङ्ग उब्जिएको छ । विगतमा वर्ष दिनभन्दा लामो समयसम्म उनले आफ्नो निर्वाचन अभियानका क्रममा उठाएका कतिपय एजेन्डा सजिलै कार्यान्वयन हुन नसक्ने र त्यस बखत अमेरिकी जनताको ध्यान र मत आकर्षण गरी विजयी हुनका लागि उद्घोषण गर्नु ती नाराहरु केवल चुनावी हथकण्डामा मात्र ... बाँकी अंश»
२०७३ माघ २२ शनिबार, काठमाडाै‌ । महाभारत शब्द नै युद्धको पयार्यवाची शब्द बनेको छ । लँडाई साधन हो । साध्य सत्य र सत्ता हो । धर्म एवं सत्यको पक्षमा लागेर गरिने लँडाई आदर्श लँडाई हो । आदर्श लँडाईको कीर्ति युगौ युग रहिरहन्छ । सत्ता प्राप्तिका खातिर गरिने लँडाईको खासै दीर्घकालीन चर्चा हुँदैन । महाभारत सत्य सहितको सत्ता प्राप्तिको लागि गरिएको युद्ध हो । तसर्थ यो युद्ध अझ विशेष छ । उत्तम साध्यको प्रयोजनको निम्ति जस्तो साधनको प्रयोग गरेपनि त्यसको औचित्य सिद्ध ह ... बाँकी अंश»
२०७३ माघ २१ शुक्रबार, काठमाडौ । उच्च शिक्षामा सरकारी क्याम्पसहरुले मात्र देशको शैक्षिक आवश्यकतालाई पूरा गर्न नसकेकोले वि.सं. २०३७ सालमा तत्कालीन सरकारको नीति बमोजिम त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सामुदायिक क्याम्पस स्थापनाका लागि मार्ग प्रस्तुत गरेको हो । नेपालमा रहेका विभिन्न विश्वविद्यालयमा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरुमध्ये समूदायबाट संचालित क्याम्पसहरुलाई पब्लिक क्याम्पस भनिन्छ भने व्यक्तिबाट सञ्चालित नाफामुखी क्याम्पसलाई निजी क्याम्पस मानिन्छ । २०७ ... बाँकी अंश»
२०७३ माघ १५ शनिबार, वासिङ्टन डिसी (अमेरिका)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफु राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि अमेरिकी राजनीतिमा देखिएको आश्चर्यजनक र सनसनीपूर्ण सङ्क्रमणकालको अन्त्य हुन लागेको छ । यो समयले आगामी दिनमा ट्रम्पसँगको जीवन कति अकल्पनीय हुनेछ भन्ने जगजाहेर भइसकेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनपछिको सङ्क्रमणकाललाई ट्रम्पले आफ्नो पदाधिकारी छनौट र आगामी दिनमा अमेरिकाले कस्ता प्रकृतिका विषयमा झन्झट व्यहोर्न पर्नेछ भन्ने विषयको अध्ययन गर्न प्रयो ... बाँकी अंश»
२०७३ माघ १० सोमबार, काठमाडौं । अमेरिकामा पछिल्लो समय सत्ता परिवर्तनको क्रममा उठेको एउटा शब्द दक्षिण एशियाली मुलुकहरुको लागि ज्यादै प्यारो लाग्यो । विशेषगरी ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्म हिन्दूहरुको बाहुल्यता रहेको भारतीय उपमहाद्वीपमा पर्ने यी मुलुकहरुले अहिलेसम्म संरक्षण गरेर राखेको हिन्दू धर्मलाई इशाई धर्मको सबैभन्दा मूल संरक्षकको रुपमा रहेको अमेरिकाले पटकपटक हिन्दू धर्मलाई महत्वका साथ लिएको देख्दा सनातन धर्मका अनुयायीहरुलाई खुशी नलाग्ने पनि किन ? पक्कैपन ... बाँकी अंश»
२०७३ माघ ७ शुक्रबार, काठमाडौं । शुक्रबारदेखि अमेरिकाको ४५ औं राष्ट्रपतिको रुपमा डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यभार सम्हाल्दैछन् । गत नोभेम्वरमा राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उनले शुक्रबार सपथ ग्रहण गर्दैछन् । उनी राष्ट्रपतिको रुपमा निर्वाचित भएदेखि सपथग्रहण गर्नुपूर्व उनको व्यवसाय र उनीको व्यवहारमा के कति फरक आयो त ? यो धेरैको चासोको विषय बन्न सक्छ । त्यही विषयमा न्यूयोर्क टाईम्सले प्रकाशित गरेको विषयलाई हामीले पनि नेपालीमा अनुवाद गरेका छौं । १ तस्वीरमा परिवर्तन&nbs ... बाँकी अंश»